Indlela yokwakha umsebenzi kwi-Digital Marketing? - ITS Tech School
22 UCanzibe 2017
Ukwenza umsebenzi kunye nokwakha umsebenzi wezinto ezihlukeneyo, ndicela abantu abasebenzayo, abasebenzayo, abaxhamli bezemisebenzi, ulutsha olungasebenziyo ukuba luhlale lusicacile - ingaba bafuna uYobhi okanye uMsebenzi? "UYobhi" ngaba unokuya eofisini okanye wenza umsebenzi ngexesha elilinganiselweyo kwaye yonke imihla wenza okufanayo kunye nokuba ufumana imali. Kodwa "Umsebenzi" Ngaba wenza umsebenzi owufumanayo kunye nokuwufumana umvuzo kwaye uza kukunika ithuba lokukhula nokukhula ngokukhulu. Ngenxa yokuba ndiyayithanda umsebenzi kwaye ndifuna ukwakha isikhundla esifanayo. Inkqubo yokuThengiswa kweDivaysi litshintshile ubomi babaninzi basomashishini.
Kwaye namhlanje kwi-Digital media world, ukuba ufuna ukwenza umsebenzi okanye ukwakha umsebenzi wakho olula xa uthelekiswa nexesha elidlulileyo. Ngenxa yokuba Idijithali sinokufikelela kwidata enkulu kwihlabathi. Kwaye ukuba unobutsha ongasebenzi, Umama weNdlu, i-college student, umthengisi okanye usomashishini kufuneka ube yedijithali ifakwe ukuthengisa okanye ukubonelela ngeenkonzo.
Amandla okuThengiswa kweDajethi
I-Flipkart esekelwe kwi-2007 kunye neqela labasebenzi kunye neenkonzo ezincinci - ngoku banabasebenzi be-30000 kunye nemali ye-R. I-15,129 crore, kwaye bazithengisa iimpahla nge-digital media. Iiblogi - Amit Agrawal ukupapasha iiblogi kwi-www.labnol.org kwaye ufumane iR. Iilaphu ze-20 kumaLakes we-30 ngenyanga kuphela nge-IT tech blogs. Ngamandla eendaba zeDijimenti umntu angayifumana ngokukwabelana ngolwazi.
Ngoko ukuba sele ulahlekile ibhasi lomsebenzi - akwazi ukwenza okokuba apha sizongenelelo zeteknoloji ezingenakukunikezela ukuba ujoyine ikhosi yethu, oko kukuthi ukuthengiswa kweMedia Media, siyakwenza ube namandla kakhulu ngolwazi lwamajelo edijithali onokucwangcisa ukudala iiwebhsayithi, cwangcisa iiprogram zokuthengisa zedijithali, ukuqhuba idijithali Ukuthengiswa kweendaba kumakhasimende akho okanye kwimveliso yakho yenkampani, Ukwandisa ishishini lakho nge-digital media marketing ngokushicilela iposi ye facebook, Instagram.
Umsebenzi wokuthengisa Kungcono kumama wendlu (imisebenzi yomama wendlu, asebenze ekhaya) kuba siqonda abenzi basekhaya banembopheleleko yabo njengentsapho, abantwana, umsebenzi wasekhaya kunye nokunye okungakumbi kodwa ungakhathazeki kwilizwe ledijithali akudingeki uchithe it talente yakho. , I-Digital digital marketing marketing iya kukunceda ukwazi ukufumana ulwazi olubalulekileyo onokunyusa umntu othile kwishishini langoku, unokunyusa umdla wakho, ungabhala iiblogs ekudleni, indlela yokunyamekela abantwana, izifundo ezithile ezincinci kwisifundo sakho. Amathuba amaninzi kuwe - ngoko ke ulindelani ukujoyina yethu - Inkqubo yokuthengisa kwaye ubonise italente yakho ibe ilungu elifumana umvuzo kwintsapho yakho.
Abathengisi / Abashishini / ukuqala - Iimingeni ezinkulu kakhulu eziza kuthiwa ngubani oza kwenza ukuzithengisa amajelo edijithali ngokwabo, ukulandelela oko benzayo, ngaba benza okuchanekileyo okanye akunjalo, yintoni eya kuba yi-ROI ekuthengiseni, ngaba ndifumana nayiphi na inzuzo okanye kungekhona - ewe, kukho imibuzo eninzi engaphendulwayo, akufuneki ukuba uxhalabise - gcina nje iiyure ezimbalwa ukususela kwixesha lakho kwaye ufunde ukuthengiswa kweendaba zedijithali, ingcali yethu iya kuqonda ibhizinesi lakho kwaye ikuncede ukuba wakhe nayiphi na isicwangciso sokuthengiswa kwedatha.
Ulutsha olungasebenziyo - Iikhomputha zihlala ziyimisebenzi enenzuzo, kodwa ingxaki ivela xa ungafundwanga iikhompyutheni kwinqanaba, ngoko kufuneka ungakhathazeki - ukuba ufunda izifundo ezingekho zeekhompyuter ezifana ne-BA, i-BCOM, i-BSC kwaye isasafuna ukwakha umsebenzi kwiikhompyutha, apha kukunika ithuba lokwenza oko. I-1000 yomsebenzi engekho umntu ongenamntu okhangela abaqeqeshi bezentengiso zedijithali, bajoyine Ikhosi yezobugcisa bokuthengisa ukuba nomsebenzi oqhubekayo kwi-Digital media marketing.
BBA / MBA / uchwepheshe osebenzayo ekuthengiseni - Uyazi ukuba kunzima kangakanani ukuvelisa ukutshintsha kweemarike, kunzima kangakanani ukuchaza iingenelo zemveliso, kunzima kangakanani ukulungelelanisa abathengi bakho ngeenkonzo, kwaye siqinisekile ukuba kufuneka usebenzise i-PowerPoint, iintetho, i-imeyile, ukubiza okubandayo, umnyango ukuthengiswa kweminyango, ukubonakaliswa kwendlela, kunzima, kwaye siqinisekile ukuba uyazi ukuba ngubani umthengi wakho, yiphi i-geography, yiphi iqela leminyaka, isini, ukuhlawula amandla kunye neninzi yamaparameters, kwaye ukuba siya kukunika inketho ngokumisa isikhangiso ucacise iqela ngeparameter - awucingi ukuba kuya kuba yi-GREAT! Ewe, konke kunokwenzeka kwi-Digital media world, ngoko ngoku ucinga ukuba kufuneka wenze ntoni, umsebenzi onzima okanye umsebenzi onobuchule.
Ukufezekisa i-GOAL's by learning Digital urhwebo kwiisombululo zeteknoloji.